စိန်ပွင့်လေးတစ်ခု ရွေးပြီး သင့်အချစ်ရေးသာယာဖို့ ပြင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကို ပြောပြပေးမယ်
စိန်ပွင့်လေးတစ်ခု ရွေးပြီး သင့်အချစ်ရေးသာယာဖို့ ပြင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကို ပြောပြပေးမယ် (၁) ငွေရောင်စိန်ပွင့် အချစ်ရေးမှာသာယာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ရင့်ကျက်မှရပါလိမ့်မယ်။ ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာ အနေအထိုင်အပြုအမူကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ စိတ်ဓာတ်ကိုပါ။ သင့်ချစ်သူက သူ့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းတစ်ယောက်ကို လက်တွဲပြီး ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်တွေကို အတူတူပန်းဝင်ချင်တာပါတဲ့နော်။ (၂) မိုးပြာရောင်စိန်ပွင့် သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖော်ရွေမှုလိုအပ်နေပါတယ်။ တရင်းတနှီးရှိမှုတွေ၊ အချိန်ပေးဖို့တွေ၊ ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံဖို့တွေ စသဖြင့်ပေါ့။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် သမီးရည်းစားလိုဆက်ဆံပေးပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူများအတွက်ကြီးပဲ အချိန်ပေးရမယ်လို့မဆိုလိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလူသားနဲ့အတူတူရှိနေဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှတော့ သူတို့ကို ချစ်ခင်ကြင်နာယုယရပါတော့မယ်မဟုတ်လား။ (၃) အစိမ်းရောင်စိန်ပွင့် အချစ်ရေးလေးသာသာယာယာဖြစ်စေချင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့သဝန်တိုမှုတွေကို လျှော့ပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်သူချင်းကတော့ သဝန်တိုတာတွေဘာတွေရှိမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အလကားနေ အလကား …
ဘ၀မှာလူတိုင်းအရှုံးနဲ့ မကင်းပါဘူး..။ အရှုံးဟာ .. အဆုံးမဟုတ်ပါ..။
ဘ၀မှာလူတိုင်းအရှုံးနဲ့ မကင်းပါဘူး..။ အရှုံးဟာ .. အဆုံးမဟုတ်ပါ..။ ဘ၀မှာ ကျရှုံးတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို သတ်မှတ်သလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ရှုံးတာလည်း ရှုံးတာပဲ။ နှစ်ကြိမ် ရှုံးတာလည်း ရှုံးတာပဲပေါ့။ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ သော် ဒီလောက် အရှုံးလေးနဲ့ တော့ ဘ၀ကို ဆုံးတယ်လို့ မသတ်မှတ်နဲ့ လို့ ပဲ မှာပါရစေ။ အရှုံးသမားဆိုတာ လောကမှာ လူတိုင်း ဒီနာမည်တပ်ခံ ရဘူး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မြှောက် ကျဆုံးခြင်းတော့ အဖြစ်မခံ ပါနဲ့ ။ တစ်ခဏတာ အရှုံးပါ။ ဒီလောက်နဲ့ တော့ ဘ၀ကို အဆုံးမခံကြနဲ့ ပေါ့။ ကိုယ့် မှာ …
သင်ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပြီး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းနိုင်ပါ့မလား ?
သင်ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ကျနိုင်ပြီး၊အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းနိုင်ပါ့မလား ? နှလုံးလမ်းကြောင်းဖြင့် နီးစပ်သော မျဉ်း ဒီလို မျဉ်းမျိုး တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခု ရှိရင်တော့ သင်က အိမ်ထောင် စောကျကိန်း ရှိပါတယ်။အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ ။ လက်သန်းနှင့်နီးသောမျဉ်း ဒီလို မျဉ်းမျိုးပါ ရင်တော့ နောက်ကျမှ အိမ်ထောင်ကျ တက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်းနှင့် တွေ့ဆုံရ တက်ပါ တယ်။ ၃၅- ၅၀ အတွင်း အိမ်ထောင်ကျ နိုင်ပါ တယ်။ လက်သန်းနှင့် နှလုံးလမ်းကြောင်းကြား အလယ်ကျသောမျဉ်း အိမ်ထောင်ကျချိန် ပုံမှန် ပါပဲ။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်လောက် ကျနိုင် ပါတယ်။ မျဉ်းကြောင်းများစွာ …
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်သက်စာစွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်သင့်တဲ့ နံနက်ခင်းအမူအကျင့်များ
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်သက်စာစွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်သင့်တဲ့ နံနက်ခင်းအမူအကျင့်များ ၁။ နံနက်ခင်းရေမချိုးတဲ့အကျင့် နံနက်ခင်းမှာ ရေချိုးခြင်းက ဦးနှောက်ကို လန်းဆန်းစေပြီး ပြင်ပအရာတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်ရ တာတွေကို လျော့နည်းစေ ပါတယ်။ ပြဿနာကို ပိုကောင်းအောင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး စိတ်ကူးသစ်တွေ လည်း ရရှိစေ ပါတယ်။ ၂။ ရေနွေးနဲ့ချိုးတဲ့အကျင့် ရေနွေးက လူကို သက်တောင့် သက်သာဖြစ်စေတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နံနက်ခင်းမှာ ရေနွေးနွေးနဲ့ ရေချိုးလိုက်ခြင်းက သင့်ကို အိပ်ရာထဲ ပြန်ဝင်အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်သွားစေမှာပါ။ ရေအေးနဲ့ ချိုးတာကတော့ သင့်ကို လန်းဆန်းစေပြီး ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်မှုအား ပိုကောင်းစေ ပါတယ်။ ၃။ ဖုန်းအကြာကြီးကြည့်တတ်တဲ့အကျင့် လူအများစုဟာ အိပ်ရာကနိုးပြီ ဆိုတာနဲ့ …
” ပြန်လာခဲ့မယ် ” လို့ အားတင်းပြုံးကာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဧရာဝတီစင်​တာက (P)ဖြစ်သွားတဲ့ဗော်လန်တီယာ လူငယ်လေး….
” ပြန်လာခဲ့မယ် ” လို့ အားတင်းပြုံးကာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဧရာဝတီစင်​တာက (P)ဖြစ်သွားတဲ့ဗော်လန်တီယာ လူငယ်လေး…. ဧရာဝတီစင်​တာက (P)ဖြစ်သွားတဲ့ဗော်လန်တီယာ လူငယ်လေးပါ။ ဘယ်လိုဘဲ အားပေးကြ၊ အားတင်းထားပေမဲ့၊ လူ .. ဆိုတာ တုန်လှုပ်တတ်တာပါဘဲ။ ” ပြန်လာခဲ့မယ် ” လို့ အားတင်းပြုံး ကာပြောနေပေမဲ့၊ သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ..!! ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်လို့ စွန့်စားရင်း ခံရတာမျိုး ကျတော့ သေဘဲ သွားသွားပါ။ စွန့်စား ရကျိုးနပ် ပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ ရောဂါကူးစက် လာသူတွေကိုစောင့်ရှောက် ရတာမျိုးအတွက် ကျတော့ ကူညီရတဲ့ ကလေးတွေ မှဲ့တစ်ပေါက် မစွန်းစေ လိုပါ။ အုပ်ချုပ် သူတွေရော၊ …
သိကြားမင်းသက်စောင့် ဝေဒါသာကု ဂါထာတော်ကြီး
သိကြားမင်းသက်စောင့် ဝေဒါသာကု ဂါထာတော်ကြီး ဝေဒါသာကု ဂါထာ ဝေ ဒါ သာ ကု | ကု သာ ဒါ ဝေ ဒါ ယ သာ ဒ | ဒ သာ ယ ဒါ သာ သာ ဓိ ကု | ကု ဓိ သာ သာ ကု ဒ ကု ဘု | ဘု ကု ဒ ကု။ ထို စာလုံးများမှာ အနက် အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိပါတယ်၊ ဝေဒါသာကု ဂါထာပြန်လို့လည်း ခေါ်ကြသလို….သိကြားမင်းသက်စောင့်ဂါထာ လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်၊ …
မန္တလေးမြို့တွင် Stay at Home ကြေညာပြီး ဝင်ထွက်ခွင့်ကတ်မပါသူများကို စိစစ်နေ
မန္တလေးမြို့တွင် Stay at Home ကြေညာပြီး ဝင်ထွက်ခွင့်ကတ်မပါသူများကို စိစစ်နေ မန္တလေးမြို့ပေါ် (၇) မြို့နယ်တွင် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ(၅)ရက်မှစတင်၍ Stay at Home အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်သည့် အတွက် လမ်းပေါ် သွားလာ သူများအား ဝင်ထွက်ခွင့်ကတ် ပါ မပါစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ပညာပေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိ သည်။ မန္တလေးမြို့ပေါ် (၇)မြို့နယ်တွင် Covid-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာဦးရေမှာ တိုးပွားလာသည့်အတွက် မန္တလေးမြို့ကို Stay at Home အဖြစ် (၁၄) ရက်ကြာသတ်မှတ်ထားပြီး ထုတ်ပြန် ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာပါက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့် အရေးယူ သွားမည် ဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေး …
မင်းပြစ်မင်းဒဏ် လွတ်မြောက်စေသည်ဆိုသော ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီ၏ အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက် (၁၄) ပါး
မင်းပြစ်မင်းဒဏ် လွတ်မြောက်စေသည်ဆိုသော ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီ၏ အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက် (၁၄) ပါး စစ်ကိုင်းတောင် ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီ၏ အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက် (၁၄) ပါး ၁ ။ ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပတိုင်း ပရိတ်သတ် မည်မျှပင် လာရောက်ကြသူ များပြားစေကာမူ စေတီရင်ပြင်သည် အမြဲဝင်ဆန့် ကျယ်ဝန်းနေခြင်း ။ ၂ ။ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဝါတွင်း ဘုရားပွဲစဉ် ( ၁၄ )ပွဲတွင် ဝါဆိုလပြည့်နေ့၌ ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီကို စတင်ဆင်ယင်ပြုလုပ်ရခြင်း ။ ထိုသို့ မဟုတ်လျှင် စီစဉ်သူများအား တစ်ခုခုထူးခြားချက်များ အသိပေးခံရခြင်း ။ (ဆွမ်းပွဲများ ဦးစွာ ဆက်ကပ်လှူ ရသောကြောင့် ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဟု ခေါ်ကြောင်း သိရသည် …
နီပေါက လိုဏ်ဂူပေါင်း ၁သောင်းကျော်ရှိရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဒေသ
နီပေါက လိုဏ်ဂူပေါင်း ၁သောင်းကျော်ရှိရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဒေသ တိဘက် ကုန်းပြင်မြင့်နဲ့ နယ်မြေချင်း စပ်ဆက် တည်ရှိနေတဲ့ ယခုနီပေါ နိုင်ငံထဲက Mustang ဒေသဟာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေတုန်းကတော့ Himalaya ဒေသကနိုင်ငံငယ် တစ်ခုအနေနဲ သီးခြား တည်ရှိ ခဲ့ဖူးပါ တယ်။ ယင်းကာလ တုန်းက Mustang ဟာလွတ်လပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ အနေနဲ့ တည်ရှိ နေတာဖြစ်ပြီး (၁၈)ရာစုအကုန်လောက် မှာတော့ နီပေါ လူမျိုးတွေရဲ့ တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Mustang မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံနဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေ ကတော့ ဆက်လက်တည် ရှိနေခဲ့ ပါတယ်။ ယင်းနောက်ပိုင်း …
” နှလုံးသားကို ဦးနှောက်နဲ့ပုံသွင်းပါ “
” နှလုံးသားကို ဦးနှောက်နဲ့ပုံသွင်းပါ “ အချစ်တစ်ခု တည်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းလို့ မရနိူင်ဘူး ဆိုတာ မရှိပါဘူး သို့ပေမဲ့ လည်း ရေရှည်မှာ မတည်မြဲ ကြတာက များပါ တယ် ။ “တစ်ကယ် ဆိုရင် အချစ်ပဲ လိုတယ်” ဆိုတာ သီချင်းထဲမှာပဲ ရှိတာပါ ။ လက်တွေ့မှာ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့အချစ်ကို ကိုးကွယ်နေလို့ ဘယ်ရမလဲ…အချစ်ရဲ့နောက်ကွယ်က စား၊ဝတ်၊နေရေး ဆိုတာက အရေးပါဆုံးပဲ မဟုတ်လား??? သား၊သမီး မရှိသေးသ၍ကတော့ အဆင်ပြေနေ သေးပေမယ့် နောက်ပိုင်း သားသမီးရှေ့ရေးအတွက်က လိုအပ်လာပြီမို့ အချစ်ကို နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ဘဝကို ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပုံသွင်း …
Previous 1 … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 262 Next